FAAYILII -Warshaa Yureeniyamii Iraan, Sadaasa. 5, 2019
Raashaan dhimmaa meeshaa Nuukileeraa biyya Iraan irratii waliigaltee bara 2015 taasifame haaromsuu irratti yaadaa ishee jijjiruu malti sodaa jedhuuf ashuuraa barreefamaan kenniteen waliigaltichii akka haaromsamuu akka eeyyamtu beeksisuun ishee gabasameeraa.
Sababa Raashaan Yukireeniin weerarteen kan ka’e qoqqobii ishee irratti taasifameen walqabsiiftee walgaltee Nuukileerii Iraan irratii ilaalcha kanaan duraa qabduu irraa boodatti deebi’uu dandeessi shakkii jedhuuf Ministeerii dhimma alaa Raashaa Sargee Laavaroov deebii kennaniin biyyi isaanii yaada akkanaa akka hin qabne ibsaniiru.
Lavaroov ibsaa kaleesaa kennaaniin dura , Bitootessaa 5/2022 dhimma kana ilaalchisuudhaan yaadaa kennaniin hariiroon biyyii isaanii Iraanii wajjin qabduu waliigaltee Nuukileeraatiin kan ka’ee akkaa midhamuu hin dandeenyee ibsaniiru.
Dubbii himaan ministeeraa dhimmaa alaa Yunaayitid isteets Niid Praayis waa’ee kana irrati yemuu oduu gabaastotati dubbatan akka jedhanitti, waliigalteen Nuukilaarii Iraan Weerara Raashaan yukireen irratti taasfteen walqabatee qoqqobbii ishee irraa kaa’amee keessaa sababa ittiin baatuu ta’uu hin qabu jechuun isaanii gabasameera.
Biyyii qoqqobbii diinagdee jala jirtuu Iraan, meeshaa nuukileeraa qabaachuuf sochii gootuu akka dhaabduu dhiibbaan akka irratti taasifamaa jiru ni beekama.